खोप लगाएको मानिसलाई पनि किन कोरोना लाग्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
खोप लगाएको मानिसलाई पनि किन कोरोना लाग्छ ?
विश्वमा कोभिड-१९ महामारीको नयाँ लहर देखा परिरहेको छ।
केफउरीले यी प्रमाणले ओमिक्रोन भेरिअन्ट र बढिरहेका सङ्क्रमणका घटनाका सन्दर्भमा खोपको महत्त्व अझ पुष्टि गरेको डाक्टर केफोरी बताउँछन्।
(बीबीसी ब्राजिलका लागि एन्ड्रे बिअरनेथले तयार पारेको लेखको अनुवाद।)